Uhlobo luni lwesitshalo oluwusizo kwasekuseni lwezingane
Izingane Ukunikezwa kwamandla
Ekuseni, isidlo sezitshalo, ngokungangabazeki, siyosizuzisa ingane. Kuncike ekutheni uyilungisa kahle. Futhi ngothando. Mayelana niphi iphalishi ewusizo kwasekuseni zezingane nokuthi kungani, futhi sizoxoxwa ngezansi.
Isikhathi sokudla kokuqala kuthatha izinyanga ezingu-6. Njengomthetho, izazi zincoma ukuthi ziqale nge-puree yemifino (yezingane ezincane), noma ngamabele (kubantwana abanobuthakathaka nabanamahloni). Kungani? Iqiniso liwukuthi le mikhiqizo ingcono kakhulu yithandwa ngumzimba wengane. Ngendlela, kungenzeka ukuthi izimpande zaleso seluleko zibuyela emuva esidlule. Ake ucabange nje: i-porridge isibeke isisekelo sezinto eziningi zokudla emhlabeni!
Usanhlamvu, ibhali, isilwane, i-rye, ngisho nasezindabeni zasendulo kanye nemigqa yamaSlav kuthiwa yizinto eziyinhloko zokudla kokubili izingane kanye nabantu abadala. Futhi hhayi ngenxa yokuthi okhokho bethu babengenakho okunye ukudla. I-porridge nje iyasiza, ngokumangalisayo okuhlwabusayo futhi okunomsoco futhi, ngaphezu kwalokho, ikulungele kalula. Ngaphezu kwalokho, ba ... kukhona ukwelashwa, ngakho akufanele uwashiye. Ungalokothi!
Iqiniso lokuthi i-croup iqukethe ama-carbohydrate amaningi, iqiniso eliyaziwayo. Kanye nokuthi ama-carbohydrate ayimithombo yamandla emzimbeni. Ngakho-ke, ziyasiza kakhulu kwasekuseni izingane. Ngaphezu kwalokho, okusanhlamvu yi-storehouse yama-macro nama-microelements namavithamini. Kodwa ngayinye yazo iyigugu ngendlela yayo.
Amaprotheni, isitashi, amafutha enempilo. Amavithamini B1, B2, B6, PP. Izinto ezimbiwa ngamaminerali: i-phosphorus, insimbi, i-magnesium, i-potassium ... Lokhu akulona uhlu oluphelele lalokho lo mkhiqizo ucebile. Siyabonga ngakho konke lokhu okuphulukisayo! I-porridge ekhukhunjini iyanciphisa ingozi yesifo senhliziyo, isusa i-cholesterol eyengeziwe emzimbeni.
Le cereal ingumnikazi wokurekhoda we-starch content (cishe 77%). Ibuye inevithamini E, PP. iqembu B ne-folic acid. Le ndlela yokugcina iyindlela yokuvimbela i-anemia. Ilayisi isebenza kahle ngezinkinga zesisu.
Kuningi amaprotheni ku-oatmeal. Futhi amafutha yemifino ngokuvamile aphindwe kabili kunokwama-buckwheat, 5.8%! Indawo yokusebenzisa ukwelashwa kwe-oatmeal inkulu. Decoction kuso, kanye iphalenda, kusiza ngokuphelele ngezifo zamathunjini, isifo sikashukela, ukuvuvukala kwesibindi.
Kuwusizo kakhulu ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwamaprotheni, amafutha, ama-carbohydrate, amavithamini A, D, E namaminerali. Kusukela kulesi sitshalo kuveza i-pearl ne-barley groats. Kulezi zinsuku, i-fibre ngaphezulu, okusiza ukuqeda ukuqothulwa. Ngendlela, i-decoction yebhali noma i-pearl ibhali kuhle ukukhwehlela. It isenzo esolula futhi enveloping.
Ukudla kwasekuseni kwebhulakudi kwakusihlwa futhi kuyisiphuzo esihle sabantwana, udinga ukwazi ezinye zezimfihlo zokupheka. Ngakho, okokuqala, i-groats kufanele ihlungwe. Khona-ke kudinga ukuhlanzwa ngokuphelele. Ilayisi, i-millet ne-barley pearl kuqala ngamanzi afudumele (cishe ngo-10 ° C) bese ishisa (60 ° C). Ibhali ligezwa ngamanzi amancane amanzi. Ingabe i-karapuz iyakuthanda u-buckwheat noma ukolweni? Ukwenza kube nzima, ungasheshe udobe i-rump.
Kukhona imfihlo eyodwa. Uma i-croup ingakafiki isikhathi eside, iyopheka ngokushesha. Ingabe isigaba sokulungiselela siqedile? Siqhubeka ngokuqondile ekulungiseleleni. Thela amanzi epanini. Uma lipheka, uthele i-rump. Hlanganisa ukushisa okuphansi kuze kube yilapho ithatha wonke amanzi. Isizini nebhotela. Ungathululela ubisi (uma ufisa). Khonza eplaneni elihle ngesilwane esincane esincane.
Ngaphandle kwezinhlamvu zesisindo ezivamile, ungathenga ama-porridges wokukhiqiza ezimbonini eminyangweni yokudla komntwana namuhla. Zenzelwe izingane ezincane kakhulu. Ungakhathazeki ngekhwalithi yabo - i-porridge enjalo iyasiza ekudleni kwasekuseni izingane. Kuphakheji ngalinye elimibalabala kuyadingeka ukukhombisa hhayi kuphela ukwakheka, kodwa futhi nobudala bomntwana, okwenziwe ngalo mkhiqizo. Kukhona amanye amaphuzu amahle. Kulezi zitshalo okuqukethwe kwama-macro-, microelements namavithamini abalulekile. Bayi-milk and free-milk, kusuka kokusanhlamvu okulodwa futhi kusuka eziningana. Futhi ngisho nezithelo! Ngaphezu kwalokho, zikhiqiza okusanhlamvu okukhethekile: ukuvimbela i-dysbacteriosis (ene-bifidobacteria), ukuze ulale kahle ... Kulula! Kuyatholakala! Kuyinto ehlwabusayo! Awungikholwa mina? Zama wena ngokwakho! Kodwa akusikho konke. Amakati asezimboni asekulungele ukudla. Ungathinti futhi ugeze i-rump. Ngokuvamile, ngisho akudingeki upheke. Kwanele nje ukucubungula ingxube bese wengeza iphalenda eliyimpuphu kuwo. Ungakhohlwa ukugubha ngokucophelela ukuze kungabikho izibani. Futhi unganikela indodana yakho noma indodakazi yakho encane! Okokuqala, thatha uhla olulodwa lwesipuni setiyi. Khona-ke, ube ne-rasprobovav, vula umlomo bese ucela okuningi. Ubani ongawuthandi lokhu?
UKUPHILA: ama-gramu angu-50 welayisi, isanqante esisiphakathi, ama-inflorescences amathathu amancane e-broccoli, isipuni 1 se-sunflower noma amafutha ommbila, ama-gramu angu-50 we-veal aphilile, amabili wezipuni. izinkezo ze-milk formula
UKUHLELA: Ilayisi, uthele u-200 ml wamanzi, uvuthe umlilo. Imizuzu engu-10 ngaphambi kokudla, ufake i-broccoli ne-izaqathe. Phelela ngokuphambene inyama, phinduka. Irayisi elungile nemifino yifani ngemfoloko, engeza ingxube yobisi, ibhotela nenyama. Hlanganisa bese ulethe emathumba. I-porridge enjalo iyasiza ekudleni kwasekuseni izingane, kusukela ezinyangeni eziyisithupha.
Ukudla okunempilo kwezingane ezempilo
Yiziphi amabhaktheriya awusizo?
Ngingahlala isikhathi esingakanani ngondla ngamabele?
Isithakazelo ekudleni kwezingane
Ukupheka okunomsoco kwabantwana abaneminyaka engu-1 ubudala
Luhlobo luni lokudla okumele lukhethwe usana?
Indlela yokunciphisa ingane egqamile
Kuthiwani uma ngingakwazi ukuxhumana nabafana, nginamahloni kakhulu?
Ukuqeqesha umlingisi u-Olga Lomonosova: "Isifundo phansi" ngesibalo esincane emva kokubeletha
Izinhlobo zesikhumba sobuso futhi uyinakekele
I-Horoscope: unyaka we-tiger ngamawele
Indlela yokuphulukisa ama-acne nama-acne
Izesekeli zezithombe, i-Autumn-Winter 2015-2016, isithombe
Ukudla kobuhle besifazane
Isifo se-hypertensive nokuphathwa kwayo ngezigaba ezahlukene
Ungakhetha kanjani i-parrot efanele?
Isaladi lesipinashi kanye nemifino
Ukudla kwezinsuku ezintathu u-Alicia Silverstone
Izinzuzo kanye nokuqeda ukudla kokudla okufana nokolweni
Usuku luni lwezinkampani ezinamandla emoyeni ngo-2015? Siyakuhalalisela amaFor Airborne Forces
I-Vegetarian Pasta Fettuccini Alfredo
Ingulube ye-ingulube ngamalenti